Mofon’aina – ALAKAMISY 29 MARTSA 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 29 MARTSA 2018
29 martsa 2018
30 Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nankany amin’ ny tendrombohitra Oliva.31 Ary tamin’ izany dia hoy Jesoa taminy: Ianareo rehetra dia ho tafintohina noho ny Amiko anio alina; fa voasoratra hoe: Hamely ny mpiandry Aho, dia hihahaka ny ondry andrasana.32 Fa rehefa atsangana Aho, dia hialoha anareo ho any Galilia.33 Fa Petera namaly ka nanao taminy hoe: Na dia ho tafintohina noho ny Aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina mandrakizay.34 Hoy Jesoa taminy: Lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo ianao.35 Hoy Petera taminy: Na dia hiara-maty Aminao aza aho, tsy mba handà Anao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain’ ny mpianatra rehetra.
MATIO 26 :30-35
MITARIKA NY MPIANANY HIVAVAKA I JESOA
1- Midera an’ Andriamanitra i Jesoa
Eny an-dàlana ho any an-tendrombohitra Oliva i Jesoa mitarika ny mpianatra hiombom-bavaka sy hiatrika ny fijaliany . Manaova fiderana ny Tompo ho fanatanterahana ny sitrapon’ ny Tompo. Hanatanteraka izay voasoratra momba Azy i Jesoa Kristy. Manaiky Izy hiharan’ny Tenin’ Andriamanitra (and 3; Zak 13 :7). Tsy ny fahazoan-javatra na tombotsoa manokana no hiderana ny Tompo fa ny fanaovana ny sitrapon’ Andriamanitra .
2-Manambara ny famonjeny ny Tompo
Manambara ny fahafatesany sy ny fitsanganany i Jesoa Kristy. Hovonoina i Jesoa dia hiparitaka ny ondriny : ny mpianany sy ireo mpanaraka Azy (and 31). Eken’i Jesoa Kristy izany sitrapon’ny Rainy izany mba hahatanteraka ny famonjena ny mpanota. Tsy izay tian’ny olona tokoa no famonjena fa izay fikasan’ Andriamanitra. Tsy maintsy maty i Jesoa ho fibebahany ho antsika, ary tsy maintsy atsangana Izy mba ho santatry ny hahavelomantsika.
3-Mampibebaka ny mpianatra ny Tompo
Mampibebaka an’i Petera sy ny Apostoly i Jesoa Kristy fa handà Azy izy ireo . Matotra ny Tenin’i Jesoa, handà an’i Jesoa intelo ny mpianany amin’ny ora misasakalina ka hatramin’ny telo ora maneno akoho. Marina ny tenin’ny Tompo. Mieritrereta dia mibebaha fa tsy mahay mandainga ny Tompo. Tsy fihetsehampo no hanompoana ny Tompo fa ho araka ny sitrapon’ Andriamanitra.
Ahoana no fahatsapanao ny atao hoe: mivavaka?
Mofon'aina - ALAROBIA 28…